Manome 4 Tapitrisa Robla Ho An’izay Mahavaha Ny Tor i Rosia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Jolay 2014 3:06 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Français, македонски, русский, عربي, Português, polski, English
Fangon'ny Tor, nampiasaina rehefa nahazoana alàlana. Sary nafangaron'i Kevin Rothrock.
Manome 4 tapitrisa robla (eo amin'ny 100.000 dolara amerikana eo) ny governemanta Rosiana ho an'izay olona afaka mahita fomba azo antoka hamahàna ireo angon-drakitra alefa amin'ny alàlan'ny tambajotra tsy fitononana anarana Tor. Fanentanana napetrak'i Kremlin hanoherana ny aterineto misokatra, raha tsy hilaza afa-tsy ny ampamoaka nataon'i Etazonia mikasika ny fitsikilovan'ny governemanta, nahatonga ny Tor ho nahasarika misimisy kokoa ireo Rosiana mpampiasa aterineto mikatsaka fomba handinganana ny sivana ataon'ny fanjakàna.
Novolavolaina ho toy ny tetikasa iray an'ny Laboratoara Amerikana momba ny Fikarohana an-dRanomasina efa ho folo taona mahery lasa izao, ny Tor dia mamadika ny fivezivezena ety anaty aterineto ho tsy hita zohiana amin'ny alàlan'ny fandefasana azy miainga avy aminà lamina tokana fantatra amin'ny hoe “onion routing system”. Ankehitriny dia any an-tànan'ny vondrona iray tsy mikatsaka tombontsoa ilay tetikasa ary mitohy mahazo famatsiam-bola federaly, nefa misy eo amin'ny 4 tapitrisa eo no mampiasa azy manerana izao tontolo izao, anatin'ireny ireo mpikatroka mafàna fo mahafehy tanteraka ny teknolojia dizitaly any amin'ireo firenena izay mbola anjakan'ny sivana ara-teknika sy ny fanaraha-maso. Na dia ny departemantam-panjakana Amerikana aza dia manohana ireo fandaharanasa izay manofana ireo vahiny mpikatroka mafàna fo mba hampiasa ny Tor hiarovan'izy ireny ny tenany amin'ny masobe mpanaramaso avy amin'ireo governemanta tsy refesi-mandidy.
Efa nisedra olana tao Rosia ny Tor tany aloha tany. Raha ny marina, ny sampam-pitsikilovana voalohany ao amin'ny firenena, ny FSB tamin'ny taona lasa, no nanasa atidoha ny Duma mba hanakana ny Tor. Naneho ny fanohanany an'ilay hetsika ireo solombavambahoaka, saingy tsy nivoaka ivelan'ilay kaomity mihitsy ilay izy.
Stanislav Sharikov mpitarika ny Russian Pirate Party (Antoko Rosiana Mpijirika) miteny fa mety misy ifandraisany amin'ny fiasàna loha hanao asan'ny polisy fa tsy dia resaka famoretana politika loatra ny fanavaozan'ny governemanta Rosiana ny fahalinany amin'ny famahàna ny Tor. Ilay fifanarahana hanome 100.000 dolara amerikana (antontam-bola somary kely raha miohatra amin'ny fenitra indostrialy manerantany) dia tsy ny FSB no nanolotra azy fa ny Ministeran'ny Atitany, izay araka ny lazain'i Sharikov dia liana bebe kokoa amin'ny ady atao amin'ny resa-betaveta atao amin'ny zaza tsy ampy taona fa tsy amin'ireo mpanohitra an'i Poutine.
Mazava loatra, Tor dia teknolojia “sabatra roa lela”. Amin'ny fanomezana ho an'ny olona ireo fitaovana handosirana sivana sy fitsikilovana, ampiasain'ireo olona mpiketrika heloka bevava, mpanondrana zava-mahadomelina, mpanao fifanakalozana sy mpivarotra ankizy ho amin'ny sarimihetska mamoafady ihany koa ilay tambajotra. Antontan-taratasy naporitsak'i Edward Snowden no manaporofo fa nanokana volabe ny Masoivoho misahana ny Fiarovana ao Etazonia mba hijirihana ny Tor, mba hisintona angon-drakitra momba ireo olona mampiasa azy io.
Mitanisa indrindra ireny fampiasana ny Tor mampiasa loha azy ireny ny governemanta Amerikana rehefa manamarina ny ezaka ataony hamaky ny angon-drakitr'ireo mpampiasa azy io. Saingy ny natioran'ilay tambajotra amin'ny maha-tsy itononana anarana azy dia mampanano-sarotra ny hahafantarana mazava hoe iza ilay mampiasa azy, hatao inona, manerana izao tontolo izao.
Na dia toa tsy dia hotanteraka loatra aza, raha tafita io tetikasa famahàna kasain'i Rosia hatao io, dia ho tandindonin-doza ireo olona an-tapitrisa mpisera amin'ny aterineto izay tsy ratsy velively ny safidiny hiditra amin'ny tsy fitononana anarana ety anaty aterineto..